ဆရာ ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ
ကျွန်တော့်ဘလော့မှာလဲ ရေးချင်လို့ ပုံကို ကူးယူသွားပါတယ်။ ခွင့်ပြုပါ။
ဆရာကန်တော့ပွဲ ကျင်းပဖို့ တစ်လသာသာလောက်ပဲ လိုတဲ့အချိန်လေးမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပြီ။ ၂၀၁၀ ရဲ့ ဆရာကန်တော့ပွဲမှာ ကန်တော့ခံဖို့ ဆရာ မလာနိုင်တော့ဘူးပေါ့...
၂၀၀၇ ခုနှစ် ကျွန်တော် စင်္ကာပူ ရောက်ခါစ အလုပ်ရှာမရသေးခင် ကြုံခွင့်ရလိုက်တဲ့ ဆရာကန်တော့ပွဲမှာ ဆရာ့ကို နှုတ်ဆက်ခွင့် ကန်တော့ခွင့် ရခဲ့တာ ဆရာ့အားပေးစကားတွေ ကြားရခဲ့တာ နောက်ဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ရပြီပေါ့ ဆရာ...
(နယ်နှင်ကျောင်းစနစ်အရ) ဟိုး တောင်ငူ GTI ကျောင်းလေးကနေ စွန့်စားပြီး စက်မှုတက္ကသိုလ် ဆရာကြီး ဆရာမကြီးများဆီမှာ သင်ကြားဖူးချင်လို့ တကယ်တတ်ချင်လို့ ရန်ကုန်ကို စွန့်စားတက်လာခဲ့ကြတဲ့ တောင်ငူကျောင်းက YTU နောက်ဆုံး batch အဖွဲ့လေးကို လှိုက်လှဲဖော်ရွေ ရင်းနှီးစွာ သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ ဆရာ...
အစဉ်အလာကြီးခဲ့တဲ့ စက်မှုတက္ကသိုလ် ဆရာကြီးများရဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ သင်ကြားမှုတွေကို ဒုတိယနှစ်အတွက် Drawing နဲ့ Workshop Technology ဘာသာတွေနဲ့ စတင် ထိတွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာ...
ကျွန်တော်တို့ ခံစားခွင့် ထိတွေ့ခွင့် မရတော့တဲ့ ကြို့ကုန်းကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ လွမ်းမောဖွယ်အဖြစ်တွေ ထက်မြက်တဲ့ စီနီယာကြီးများရဲ့ အတုယူစရာ အကြောင်းတွေ ကြက်သီးထစရာ RITစိတ်ဓါတ်တွေကို နယ်မှာ ၂နှစ်တက်နေရတဲ့ တပည့်တွေ စိတ်အားမငယ်ရအောင် အမြဲအားပေးခဲ့တဲ့ ဆရာ...
"တို့ မြန်မာနိုင်ငံကို သုညကနေ ပြန်စ ကြပါစို့ကွာ... ဆရာ ကတော့ မြန်မာလေးတွေကို စာသင်ပေးရင်း လူ့ဘဝက ထွက်တော့မယ်လို့ အဓိဋ္ဌာန် ချထားပါတယ်" တဲ့လား ဆရာ...
တပည့်တွေ မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်အောင်7နိုဝင်ဘာ ကိုမှ တမင်ရွေးပြီး ထွက်ခွာသွားခဲ့လေသလား ဆရာ...
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ် ဒီလို နိုဝင်ဘာလ မှာ ဘွဲ့ယူခဲ့ကြတဲ့ တောင်ငူ တစ်ဖွဲ့လုံးကိုယ်စား ရိုသေစွာ ဦးညွှတ်ကန်တော့လိုက်ပါတယ် ဆရာ...
"ဆရာ ဦးသိန်းထွန်းအောင် ကောင်းရာသုဂတိသို့ လားပါစေ"
တောင်ငူသားရေးသွားတဲ့ ကော်မန့် error တက်ပြီး ပျက်ကုန်လို့ ဘလော့ဂ်ကနေ ပြန်ကူးထားပါတယ်
ကျနော်တို့လည်း ငယ်ငယ်ကသင်ခဲ့ရဘူးတယ်။ ME သင်တာ..
ဆရာဦးသိန်းထွန်းအောင်ဆိုတာ အဖေ့သူငယ်ချင်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ဆုံးသွားတာ အဖေတောင်သိရဲ့လားမသိ.... ခင်စရာကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်လို့ပဲ ခပ်ရေးရေးမှတ်မိတော့မယ်...
ဆရာနဲ့ စာတွေ အများကြီး သင်ခဲ့ဖူးတယ်...
မိဘတွေနဲ့ပါ ရင်းနှီးတာကြောင့် ဆရာတယောက်လိုရော မိဘလိုပါ လေးစားစွာနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်...
ဆရာ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့ ဆုတောင်းနေပါတယ်...
တကယ် စိတ်မကောင်းဘူးဗျ။ ည ၁၁ နာရီလောက်မှာ အခန်းဖော်က ဆရာဆုံးပြီ ဆိုတာကို အမ ဘလော့မှာ တင်ထားတယ်တဲ့။
ဆရာဆုံးမ ပြောဆိုတာတွေကို အခုထိ မမေ့သေးဘူး။ ဆရာဟာ တကယ်ကို စေတနာပြည့်ဝတဲ့ ဆရာတစ်ဦးပါ။ ကျတော်တို့လို YTU နောက်ဆုံးအသုတ်က လူတွေကို အားမငယ်ရအောင် စေတနာထားသင်ပေးတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်ဆို သူ့ဘာသာဖြေမဲ့နေမှာ ရန်ကုန်ကနေ ၇၅မိုင်ကွာတဲ့နေရာရောက်အောင်လာပြီ လိုအပ်တာတွေကို ရှင်းပြပေးတယ်။ ဆရာဟာ နိုင်ငံကိုလဲ အ၇မ်းချစ်တက်သူတစ်ယောက်ပါ။ ဆရာပြောတဲ့ နိုင်ငံကို အကြောက်တရားနဲ့ အုပ်ချုပ်လို မရဘူးတဲ့။ မေတ္တာတရားနဲ့ အုပ်ချုပ်ရမှာတဲ့ဗျ။ ဆရာပြောပြမှုတွေကြောင် YTU ရဲ့ကြီးမြတ်မှုတွေ အစဉ်အလာကောင်းတွေကို သိခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဆရာဟာ စာကိုသာမက စိတ်ကိုပါသင်ပေးတဲ့ ဆရာကောင်းတစ်ဦးပါ။
ဆရာဆိုဆုံးမမှုတွေကြောင့် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေ တက်ကြွခဲ့ရတယ်။။။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဆရာ့ကို မျက်နှာလိုက်တတ်တယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတာ အမှန်ပါပဲ။ နောက်ပိုင်း ပြန်စဉ်းစားမိတော့ ဆရာတပည့်ဆိုတာ ပိုရင်းနှီးတဲ့ ဆရာတပည့်တွေ ရှိကြတာပါပဲ။ သေချာတာက ဆရာက အားလုံးကို စေတနာ အပြည့်နဲ့ သင်ပေးခဲ့တယ်၊ စာမေးရင် စိမ်းစိမ်းကျက်ကျက် စေတနာ အပြည့်နဲ့ ရှင်းပြတယ်။ ဆရာ့ကို ကန်တော့လိုက်ပါတယ်။
9 Nov 10, 00:06
တောင်ငူသား: ဆ၇ာ့သတင်း ကြားရတာ တကယ်ဝမ်းနည်းမိပါတယ် အမကြီး
တောင်ငူသား: ကျွန်တော်လည်း ပို့စ်တင်လိုက်ပါပြီ
9 Nov 10, 00:07
တောင်ငူသား: ဆရာကန်တော့ပွဲမှာ မတွေ့နိုင်တော့တာ မကန်တော့နိုင်တော့တာ စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ
9 Nov 10, 14:31
saund: မသီတာနဲ့ ကိုဧရာ အကို သိန်းထွန်းအောင်နဲ့ရင်းနီးသလား သူ့အကြောင်းမေးချင်လို့ 
9 Nov 10, 14:38
saund: အကိုသိန်းထွန်းအောင် အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေကို ဆက်သွယ်ချင်လို့ရမလား သိရင် ပြောကြပါ
9 Nov 10, 20:47
ဆူးသစ်: အစ်မရေ၊ ဆရာဦးသိန်းထွန်းအောင်နဲ့second year YIT ကြို့ကုန်းကျောင်းတက်နေတုန်း အပြင်မှာ engineering mechanics သင်ခဲ့ဖူးတယ်။
ဆူးသစ်: အစ်မရေးထားတဲ့ဆရာပြောသွားတဲ့စကားလေးဖတ်ရတာ စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲရပါတယ်
9 Nov 10, 20:49
ဆူးသစ်: ကျွန်တော်မှီခဲ့တဲ့ YIT ရဲ့ သက်တမ်းရင့်ဆရာကြီးတချို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သည် ဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာထည့်ရေးပါဦးမယ်
ဆရာနောက်ဆုံးအခေါက် ဆရာကန်တော့ပွဲတုံးကထဲက မျက်နှာသိပ်မကောင်းဘူးအစ်မ။ အရင်ကလောက်လဲ စကားတွေ သိပ်မပြောတော့ဘူး။
ဆရာနဲ့တော့ ကျွန်မတို့က အလှမ်းဝေးပါတယ်.
ဒါပေမဲ့ ကြားဖူးတဲ့ ဆရာတစ်ယောက် အနေနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်... ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေလို့ ဆုမွန်တောင်းမိပါတယ်..
ဆရာ... ကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေလို့ မေတ္တာပို့သလျက်...
ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ကို ၁၉၉၈အကုန်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်ထောင်တော့ အပြည့်အဝကူညီပေးခဲ့တဲ့ ဒေါ်စုခြံရှေ့ တရားပွဲတွေမှာအတူတူသွားခဲ့တဲ့ဆရာ့ကို ကန်တော့လိုက်ပါတယ်
I remembered his jokes in Yankin tuition. He wasanice man indeed!
may be we were called as "koridor min tha mee tway" then i could catch up electronic, phyuu got metalurgy.
it will be true that no ladies from section C will get electronic and go to xxxxxxxxx.